ओलीको विकल्प खोज्नु नै राष्ट्रियता कमजोर बनाउँनु हो ! « Media for all across the globe
ओलीको विकल्प खोज्नु नै राष्ट्रियता कमजोर बनाउँनु हो !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले फुटको संघारमा पुगेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रचण्ड, माधब नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेब गौतमको प्रयासपछि यस्तो अबस्था आएको हो। ओलीले जन अपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसकेको सत्य हो तर, राष्ट्रियतामा उनी बराबर अरु कोहीँ नभएको स्वीकार्नु पर्छ।
यतिबेला देशमा कोरोना महामारी जारी छ। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने अभियान चलिरहेको छ। कोरोना कारणपनि देशमा आर्थिक संकट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँनुपर्ने कुनै खास कारण अहिले देखिदैन। अरु एकमत भएर ओलीलाई साथ दिन जरुरी छ। उनले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउँनका लागि देशभक्त अडान लिएका छन्। यस्तो अबस्था पनि ओलीबिरुद्ध लागेर राष्ट्रियतामा आच आउँने काम अन्य नेताहरु किन गरिरहेका छन् – प्रश्न?
र रह्यो पार्टीभित्रको तानातानी – यसमा जनतालाई कुनै वास्ता छैन। जनताले पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री चुनिसकेपछि फेरि, किन यस्ता हर्कत ? यी कामहरु नेकपाका नेताहरुले बन्द गर्न जरुरी छ। राष्ट्रियता बलियो बनाउँनको लागि ओली कै निरन्तरता जारी राख्नुपर्दछ। ओलीको विकल्प खोज्नु नै राष्ट्रियता कमजोर बनाउनु हो ?